उपचारमा लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई अब जन्मकैद, के भन्छन् डाक्टर ? | जनदिशा
उपचारमा लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई अब जन्मकैद, के भन्छन् डाक्टर ?
काठमाडौं । चिकित्सकले उपचारमा लापरबाही गरी बिरामीको ज्यान गए ‘जन्मकैद’ सजाय हुने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
यसअघि लापरबाही गरी बिरामीको मृत्यु भए पवा अंगभंग भए चिकित्सकलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
अब उपचारमा लापरवाही गरी बिरामीको ज्यान गए वा शरीरमा कुनै क्षति पुगे उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जन्मकैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था भदौ १ बाट लागु हुनेछ ।
सरकारले ल्याउन लागेको उक्त कानुनविरुद्ध चिकित्सकरू एकढिक्का भएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले तत्काल ऐन सच्याउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
Previous Previous post: इतिहासमा आजः अगष्ट १२ तारिखकै दिन धर्म ग्रहण गर्न नमान्ने ८०० इसाईहरुको एकैसाथ शिरछेदन
Next Next post: बैंकहरुमा पर्याप्त पैसा नभएपछि विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याउँदै